कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्न पाउँछन् ? [यस्तो छ मापदण्ड] – Namaste Dainik
August 18, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्न पाउँछन् ? [यस्तो छ मापदण्ड]
इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन,इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी,हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन,पपुलेसन स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन अध्ययनका लागि पनि जिपिए न्यूनतम १.६ चाहिन्छ । यी विषय अध्ययनका लागि अंग्रेजी,नेपाली,विज्ञान,स्वास्थ्य,जनसंख्या तथा वातावरणमा न्यूनतम डी प्लसको मापदण्ड छ ।
संस्कृत व्याकरण,साहित्य,न्याय, वेद, नीतिशास्त्र,बौद्ध एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । अंग्रेजी, संस्कृत,नेपाली,सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
आमसञ्चार,ह्युमन भेलु एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजी,नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा कम्तीमा डी प्लस ल्याएको हुनुर्नेछ ।
मैथिली,हिन्दी,नेवारी,फ्रेन्च,जापानिज,उर्दू,जर्मन,चाइनिज र अरू भाषा अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ र अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।
डान्स,म्युजिक,स्कल्प्चर,पेन्टिङ,एप्लाइड आर्ट,स्पोर्टस् र अरू विषयमा न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
अहिले एसइईको नतिजा जसरी सार्वजनिक भएको छ,यो झारा टार्ने काम मात्रै भयो । परीक्षाको अवस्था बुझ्न र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि सिस्टमबाट डेटा विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । डेटा विश्लेषण नगरेर लुकाएपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गरे ? राम्रो गरे वा नराम्रो गरे ? अघिल्लो वर्ष र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ? विद्यालयले मूल्यांकन गरेको केन्द्रले डेटा विश्लेषण गर्न नहुने हो र ? कमजोरी वा राम्रा पक्ष छन् भने पनि लुकाउन खोज्नु झनै ठूलो गल्ती हो ।
अहिलेको एसइईको नतिजा घोषणा गरेको हेर्दा पद्धतिबाट भागेजस्तै भयो । परीक्षापछि पनि डेटा विश्लेषण गर्नुपर्छ । रिजल्ट निकाल्नुअघि ग्रेडको विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । यदि डेटा विश्लेषण गरेको भए परीक्षा मात्र होइन पढाइ र संस्थाका कमजोरी सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्थ्यो । डेटा लुकाइदिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो । उच्च,मध्यम,निम्म जिपिए भएका कति छन्, प्रदेशमा कस्तो अवस्था छ भन्ने डेटा पारदर्शी हुनुपर्थ्यो । देश कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन,तर हाम्रो शिक्षा उपनिवेशको छायामा छ । परीक्षासम्बन्धी अनभिज्ञता भयो ।
सरकार,राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सिस्टम सुधार्ने मौकामा चुक्यो । अहिलेको डेटा सही रूपमा विश्लेषण गरेको भए कोभिडको आपत्कालीन अवस्थामा जे गर्‍यौँ अरू त्यस्तै अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
राष्ट्रकवि घिमिरेले आफू बितेपछि सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको गीत यस्तो छ।
आजको राशिफल : भाद्र ०३ गते बुधबार।पाथीभरा माताले सबैको मनोकामाना पूरा गरून।